१३ वर्षीय बालकले १५ वर्षीया किशोरीलाई गर्भवती बनाएर बच्चा जन्मिएपछी …. – Halkhabar kura
१३ वर्षीय बालकले १५ वर्षीया किशोरीलाई गर्भवती बनाएर बच्चा जन्मिएपछी ….
इग्ल्यान्डमा एक १३ वर्षका बालक १५ वर्षीया किशोरीको प्रेममा परे । दुवैबाट बच्चाको जन्म भएको छ । ब्रिटेनमा सबैभन्दा कम उमेरमा बाबु बनेका ती व्यक्तिको नाम एल्फी हो । उनको प्रेमिकाको नाम सेन्टल हो । यो खबर ब्रिटेनमा भाइरल भइरहेको छ । १३ वर्षको उमेरमा सेन्टलको बच्चाको पिता बनेका एल्फीले २ वर्षपछि डिएनए जाँच गराएका थिए । जाँच गराएको रिर्पोट आएपछि सबैजनाको होस उडेको थियो । वास्तवमा सेन्टलले आफ्नै कोखबाट जुन बच्चाको जन्म दिएकी थिइन् त्यो बच्चा एल्फीको नभएरअरु कसैको थियो ।
Previous लोडसेडिङ हुने भएपछि डराए मन्त्री , कुलमानलाई नियुक्ति गर्ने प्रकृया अघि बढ्यो …
Next पाँच फिट गहिरो सुरुङ खनेर चो’र बैँक भि’त्र प’सेपछि…